Maalinta: 5 Oktoobar 2019
Kenan Çalışkan, Gudoomiyaha Sarkaalka Gaadiidka iyo Madaxweyne kuxigeenka İbrahim Uslu, Mehmet Yıldırım iyo Atilla Demirtunç, TCDD Taşımacılık A.Ş. Maareeyaha guud Kamuran Yazıcı ayaa u hambalyeeyay booqashada. Hadiyad uu siiyay Maareeyaha Guud Kamuran Yazıcı booqashada [More ...]
“6. Eker I Run Orod ”. Waaxda Booliska Bursa ku yiri hadal uu, "Fudud Federation of taariikhda Turkey iyo TAFE 01.03.2019 / 1922 la tirin article la Bursa Gobolka Agaasinka Dhalinyarada iyo Sport kala qaado" 6. Ceeqer [More ...]
Hüseyin Keskin, Maareeyaha Guud ee Maamulka Garoomada Diyaaradaha ee Gobolka (DHMİ) iyo Gudoomiyaha Gudiga Agaasimayaasha, oo baaritaano ka sameeyay garoonka diyaaradaha ee Atlanta, ayaa qiimeyn ku sameeyay xisaabta warbaahinta bulshada ee ku saabsan booqashada. Keskin, “Howlgal seddex geesood oo Runway ka baxsan Mareykanka markii ugu horreysay adduunka [More ...]
Diyarbakır Dawlada Hoose ee Magaalada, degmada Bismil, muwaadiniinta isticmaalka bilaashka ah ee gaadiidka xNUMX gaadiidka maalinlaha ah ee u dhexeeya 2 iyo 07.00 saacadood ee adeegga cosbitaalka ayaa sii socota. Dowladda Hoose ee Magaalada Diyarbakir, Magaalada Bismil lacag la’aan bay u tahay muwaadiniinta ku nool degmada [More ...]
Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Ordu Mehmet Hilmi Guler, wadada xeebta Badda Madow ee ku taal buundada loo dhisay bedelka Melet Bridge ayaa baaritaanno lagu sameeyay. Waxaa laga dhisay Wabiga Melet ee Wadada Xeebta Badda Madoow iyadoo ay socdaan dadaallada Dowladda Hoose ee Ordu. [More ...]
Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Magaalada Ankara Mansur Yavaş wuxuu fuliyaa ballanqaadkiisii ​​ardayda wax ku barta caasimada caasimada markay tahay biilasha biyaha ilaa kan hal. Duqa magaalada Yavaş wuxuu sharxay in kaalmada bulshada ee la siinayo qoysaska aan heysan xaalad dhaqaale ay sii socon doonto [More ...]
Duqa magaalada Mersin degmada Metropolitan Vahap doorashada, degmada Metropolitan, Turkey ee kala soocin kaliya ee lagu addoonsi iyo in degmooyinku waxay xaq u leeyihiin in ay ku shaqeeyaan dekedda baaritaan caalami ah Taşucu Harbor. Helitaanka macluumaadka shaqaalaha idman ee dekada leh ee rarka xamuulka iyo rakaabka lagu qaado [More ...]
Festival Science xnumx'inci ee Konya, xarunta ugu horeysay Turkey ee sayniska bilaabay in TUBITAK-dhameeya Konya Science Center. KONYA, Xarunta dhexe ee cilmiga sayniska iyo maantaba Uğur İbrahim Altay, Duqa Magaalada Konya Metropolitan, ayaa ka hadlay furitaanka xafladda iyada oo si weyn looga soo qaybgalay. [More ...]
Isuduwaha wakaaladda horumarinta Trakya iyo Agaasinka waaxyaha warshadaha iyo teknolada Teorlu iyo kirorlu iyo Çerkezköy Iyada oo ay iska kaashanayaan Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha, shirkadaha waddaniga ah ee soo saara gawaarida dagaalka iyo baacdooyinka waxay fursad u leeyihiin in ay ku qabtaan shirar ganacsi oo laba geesood ah oo lala yeesho shirkadaha gobolkayaga. [More ...]
Madaxweynaha İBB Ekrem İmamoğlu wuxuu booqday Unugga Talaalka iyo Daaweynta xoolaha ee Fatih isagoo qayb ka ah Maalinta Xannaanada Xayawaanka Adduunka ee 4. Imamoglu, oo markaa kaamirada hortooda ah, ayaa su'aalaha uga jawaabay suxufiyiinta ajandaha. Saldhigyada Imamoglu, Haydarpasa iyo Sirkeci [More ...]
Shirkadaha qaran ee soo saara gawaarida dagaalka iyo tareenka isu-socodka ayaa ku shiray madasha ganacsiga ee Thrace. Ka dib soojeedinta ay sameeyeen wakiilada shirkadaha, barta qaybta iyo hadafyada mustaqbalka ayaa lagala tashaday shirarka laba geesoodka ah. Shirkada loo yaqaan 'Omot Locomotive' oo isu keenta wakiilo waaxeed [More ...]
World ka soo baxay inaan ka dhaansado in wasakhda caag ah ee Mediterranean Nature Ilaalinta Foundation doon (WWF) Blue Eygan ayaa ku qotoma Izmir Turkey ee qaabka guud ee dhacdooyinka dareenka. Macnaha guud, ka-qeybgalka 'Shabakadda Caagagga-Xoreyaasha ah ee Caagagga ah ee arasında ee u dhexeeya Metrozmir Magaalo-Weyne iyo WWF [More ...]
Iyada oo ay iskaashanayaan Dawladda Hoose ee Magaalada Kayseri iyo Agaasinka Gobolka ee Waxbarashada Qaranka, Mashruuca Xisaabaadka ee Durak ayaa laga hirgaliyay Kayseri. Iyada oo la kaashanayo Dawladda Hoose iyo Agaasinka Gobolka ee Waxbarashada Qaranka, mashruuca Xisaabta ee Durak waxaa laga hirgaliyay Kayseri. Ardayda iyo dadka waaweyn ee baska jooga [More ...]
Maanta taariikhda 5 Oktoobar 1869 Porte wuxuu leeyahay qandaraas gaar ah oo la leh Hirsch, wuxuu damaanad qaadayaa 10 million francs in 65 ay ka go'an tahay bixinta muddada sanadlaha ah. 5 Oktoobar 1908 Bulgaariya waxay ku dhawaaqday xornimadooda. 19 April 1909 [More ...]